Bixiyahaaga adeegga ee xaadirkan ayaa ku sii wadi doona qaaditaanka qashinka illaa dhammaadka Mey. Haddii aad wax su'aalo ah aad ka qabto biilasha ama dalbashada adeegga kahor Mey 31, fadlan kala xiriir Maamulka Qashinka (Waste Management) taleefanka 800.592.9995 . Haddii aad jeceshahay inaad beddesho weynida weelkaaga ama heerka adeegga kaddib Mey 18eedafadlan la xidhiidh Recology CleanScapes. Dhammaan weyddiisadyada isbeddellada heerka adeeg ayaa la oofin doona kaddib 2eeda.
Waxaan si xiise leh u sugnaaba waa inaan adiga kuu adeegno!